Saturday February 15, 2020 - 08:33:58 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Madaxweynaha DFS Maxamad Cabdullaahi Farmaajo ayaa si caro leh uga hadlay culeyska ay dowladdiisu kala kulmeyso dowladda Kenya taasoo fashilineysa isku dayada uu sameynayo ee ka dhanka ah hoggaamiyaha 'Jubbaland' ee Axmad Madoobe.
Wuxuu u muuqday nin si aad ah uga careysan sida ay xukuumadda Nairobi usoo hubaneyso C/rashiid Janan islamarkaana ay uga hor taagan tahay in ciidamadiisu saameyn ku yeeshaan degmooyinka Gedo qaarkood oo ay horay u joogeen kuwa ay Kenyaatigu raali ka yihiin oo hoos taga maamulka Kismaayo.
‘’Kenya maxaa ka galay Jubbaland, waxba kama galin faragalinna kuma sameyn karto arrin ayaa naga dhaxeysa oo Badda ah waadna ogtihiin arintaa meel walba ayay u mareysaa siddii ay saameyn ugu yeelan laheyd gaar ahaan Jubbaland oo ay dooneyso in ay gaashaan ka dhiggato’’ ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.
Hadalkan ayaa u muuqda mid uu ku doonayo in uu Kenya ku dareensiiyo sidii ay uga caadi lahayd culeysk inkastoo aan la ogeyn nooca ay noqon karto jawaabta ay bixiyaan.
Kenya ayaa heysata magaalooyin ay ugu weyn tahay Kismaayo waxay duqeysaa xoolaleyda Gedo iyadoo dhulka ay ciidamadeedu qabsadeen sida dalkeeda oo kale u maamulata.
Farmaajo ayaa intaas oo dhan Kenya raali uga ah balse wuxuu diidan yahay taageerada ay u fidinayso Juubbaland xilli isaguna uu taageero ka helayo Xabashida iyadoo tusaale loosoo qaadan karayo sarkaalkii Amxaarka ahaa ee ciidankii Muqdisho laga diray ugu khudbeynayay Doolow islamarkaana sheegayay in Soomaaliya iyo Itoobiya yihiin dal qura.
Madaxii Canshuuraha degmada Kaxda oo ladilay iyo weeraro ka dhacay Baydhabo& duleedka Kismaayo.